सूचना/प्रविधि Archives | Page3of9| Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखाका सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र वजेट तयार गरेका छन् । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने स्थानीय सरकारले सूचना प्रविधि र सञ्चारको क्षेत्रमा यो वजेट छुट्याउन
काठमाण्डौ – असार ३१ गते मंगलबार आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन खण्डग्रास (आधा चन्द्रमा ढाक्ने) चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणले राति १ : ४६ बजेदेखि आग्नेय
के कतै बाढी आउँदै छ ? अब मोबाइलमै आउने छ म्यासेज
देशका विभिन्न स्थानमा बाढी÷पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल टेलिकमले सम्भावित विपद्सम्बन्धी पूर्वजानकारी सम्प्रेषित गर्नका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा बाढी÷पहिरोलगायतका
असार तेस्रो साता भइसक्दा पनि अझै मनसुन सक्रिय हुन सकेको छैन। न्यूनचापीय रेखा मध्य भारतमै रहेकाले मनसुनी गतिविधि सक्रिय हुन नसकेको जल तथा मौसम पूर्वनुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन प्रवेश
चितवन — असार १५ का दिन आइतबार राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने कार्यक्रममा पश्चिम चितवनको दिब्यनगरमा बिहानैदेखि स्थानीयको जमघट थियो । धान रोप्ने भनेपछि हली, खेतला बाउसे जहाँ पनि जुट्छन् ।
इलेक्ट्रिक एण्ड इलोक्ट्रोनिक्स एसोसिएसनमा नयाँ नेतृत्व
इलेक्ट्रिक एण्ड इलोक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन गोरखाको अधिबेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले नयाँ कार्यकालका लागि १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्बिरोध चयन गरेको छ । अधिबेसनले विद्या अर्याल अध्यक्ष रहनेगरि समिति गठन
फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो शव्द हुन्छ : हेल्लो । त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो
गोरखाका पत्रपत्रिकाले आज के छापे ?
गोरखाबाट आज दरौंदी, सुरुवात र गोरखा समाचार दैनिक छापिएका छन् ।
टेलिकमको पुरानो बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट
नेपाल टेलिकमले पुरानो बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेको छ। टेलिकमले ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा अन्य विभिन्न सेवामा यस्तो छुटको ब्यवस्था गरेको जनाएको छ। यस अनुसार २०७४ असार मसान्तसम्मको बक्यौता २०७६
कान्छो (तल्लो) दरबारको कथा
ऋग्वेद शर्मा : गोरखा बसपार्कबाट थोरै उकालो चढेपछि आउँछ रानीपोखरी । छेवैमा रहेको शिव, विष्णु र गणेशको मन्दिर हुँदै पँदेलीबाट ढुँगा छापेको बाटो पूर्व लागेपछि पुगिन्छ ठूलो आँगन ।